ရကေူးဝတျစုံလေးနဲ့ ဖွူဝငျးဥပွီးဆှဲဆောငျမှုရှိလှနျးတဲ့ ကမျးခွထေကျက ရှအေိမျစညျရဲ့ ပုံရိပျလေးမြား – Cele Zone
July 4, 2020 July 4, 2020 - by Yuan
ရှအေိမျစညျကတော့ ပွပွေဈလှပတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားနဲ့အတူ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့အလှတရားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတာ ဖွဈပါတယျ.. ။ အလှမယျတဈဦးအဖွဈ ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးမှုကို စတငျရရှိခဲ့တဲ့ ရှအေိမျစညျက နိုငျငံတကာအလှမယျပွိုငျပှဲတှအေထိ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ.. ။ အခုဆိုရငျတော့ အိမျစညျက သရုပျဆောငျအဖွဈ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှေ ရိုကျကူးနတော ဖွဈပါတယျ.. ။
သရုပျဆောငျပိုငျးမှာပါ ထူးခြှနျတဲ့အိမျစညျက နောကျပိုငျးမှာ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှနေဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှေ ဆကျတိုကျရိုကျကူးလာရတာ ဖွဈပါတယျ… ။ ရှအေိမျစညျကတော့ အသကျငယျငယျလေးနဲ့အောငျမွငျမှုတှကေို ပိုငျဆိုငျထားပွီး ပရိသတျအားပေးမှုကိုလညျး အခိုငျအမာရရှိထားတာဖွဈပါတယျ….။လတျတလောမှာတော့ သူမရဲ့ ဖွူဝငျးဥပွီး ဆှဲဆောငျမှုရှိလှနျးတဲ့ အလှတရားတှနေဲ့ ညို့ယူဖမျးစားထားပွနျတဲ့ ကမျးခွထေကျက ပုံရိပျလေးတှကေို ဖျောပွထားတာတှရေ့ပါတယျ…..။
ပုံလေးထဲမှာ အိမျစညျတဈယောကျ အပွတျလနျးလှနျးနတောကွောငျ့ ပရိသတျတှေ အခဈြပိုစမှော အမှနျပဲဖွဈပါတယျ…. ။ cele zone ပရိသတျကွီး အတှကျ မငျးသမီးခြောလေး ရှအေိမျစညျရဲ့ ပုံလေးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော… ။ရှဆေ့ကျပွီးလညျး အိမျစညျရဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုလေးတှကေို ဆကျလကျအားပေးလိုကျပါအုံးနျော…..။
ရေကူးဝတ်စုံလေးနဲ့ ဖြူဝင်းဥပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ ကမ်းခြေထက်က ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ
ရွှေအိမ်စည်ကတော့ ပြေပြစ်လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့အတူ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်.. ။ အလှမယ်တစ်ဦးအဖြစ် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို စတင်ရရှိခဲ့တဲ့ ရွှေအိမ်စည်က နိုင်ငံတကာအလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေအထိ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်.. ။ အခုဆိုရင်တော့ အိမ်စည်က သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ ရိုက်ကူးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်.. ။
သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါ ထူးချွန်တဲ့အိမ်စည်က နောက်ပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးလာရတာ ဖြစ်ပါတယ်… ။ ရွှေအိမ်စည်ကတော့ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကိုလည်း အခိုင်အမာရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်….။လတ်တလောမှာတော့ သူမရဲ့ ဖြူဝင်းဥပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားထားပြန်တဲ့ ကမ်းခြေထက်က ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်…..။
ပုံလေးထဲမှာ အိမ်စည်တစ်ယောက် အပြတ်လန်းလွန်းနေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေ အချစ်ပိုစေမှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်…. ။ cele zone ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မင်းသမီးချောလေး ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ ပုံလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်… ။ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း အိမ်စည်ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို ဆက်လက်အားပေးလိုက်ပါအုံးနော်…..။
Previous Article ပရိသတျတှေ မမွငျဘူးသေးတဲ့ ခဈြညီမလေးနဲ့အတူတှဲရိုကျထားတဲ့ အမိုကျစားပုံလေးတှတေငျလိုကျတဲ့ ပိုငျဖွိုးသု
Next Article သူမက အခဈြကို (၂၀၀) ရာခိုငျနှုနျးလောကျကိုးကှယျတဲ့သူပါဆိုတဲ့ ဖွူဖွူကြျောသိနျး